Antoine Griezmann oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Barca iyo sida uu jecel yahay in ay wax u dhacaan – Gool FM
Antoine Griezmann oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Barca iyo sida uu jecel yahay in ay wax u dhacaan
Kaafi April 8, 2018
(Madrid) 08 Abriil 2018. Antoine Griezmann waxa uu beeniyey In Barcelona ay wadahal kula jirto Atletico Madrid si ay saxiixiisa u hesho laakiin waxa uu qiray in uu rabo mustaqbalkiisa koobka aduunka ka hor in la meeleeyo.
Laacibka u dhashay France si xoog leh ee ayaa looola xiriirinayey Barcelona dhawrkii bilood ee tegay.
Atleti waxa ay isku dayday in ay meesha ka saarto xantaas iyada oo uu madaxweynaha kooxda Enrique Cerezo sheegay in ay ka saxiixan doonaan qandaraas dhacaya 2022.
Xanta waa dhammaan weyday hadana 27 jirka ayaa ku qasbanaaday in uu gaashaanka ku dhufto.
Isaga oo la hadlaya Telefoot waxa uu yiri: “Ma aqaan meesha aad ka heshiis warbixintan, waa faalso.”
Griezmann waxaa diiradda hadda u saran ol’olaha socda.
“Waxaan rabaa in aan xor ahaado oo aan ka fekero xulka qaranka France.
“Waxaan jeclaan lahaa in mustaqbalkeyga la meeleeyo koobka aduunka kahor, haddii kale, intaa kaddib su’aalp biddix iyo middig ah ayaa jiri doona. Waxaan ahaan doona si aan had ahay, wax walba siiyo kooxda.”
Ogoow magacyada 9-laacib oo galabta ciyaaraya kulankoodii ugu danbeeyay ee Derby Madrid
"Pogba wuxuu qadka dhexe ee Man City ka noqon lahaa dooqa 5-aad.".-